डिजिटल सर्किट सिमुलेशन - TINA
डिजिटल सर्किट सिमुलेशन को लागि शक्तिशाली इन्जिन
TINA डिजिटल सर्किट सिमुलेशन को लागि धेरै शक्तिशाली इन्जिन शामिल छ। TINA प्रत्येक नोड मा तर्क राज्य समीकरण को हल गर्दछ र परिणाम प्रदर्शित गर्दछ। सर्किट चरण-दर-अगाडी र पछाडिको अपरेसनको ट्रेस गर्नुहोस्, वा TINA को स्वत: चलिरहेको मोड प्रयोग गर्नुहोस्। ईवेंट संचालित डिजिटल सर्किट सिमुलेशन ईन्जिनले पनि आन्तरिक राजमार्गहरूको ट्र्याक राख्दछ, जसले डिजिटल खतराहरूको अध्ययनलाई अनुमति दिन्छ। साथै TINA डिजिटल सर्किटको पूर्ण समय आरेख प्रस्तुत गर्दछ। डिजिटल सिग्नल विशेष तर्क विश्लेषणकर्ता स्टाइल विन्डोमा प्रदर्शित गरिन्छ जहाँ हरेक सिग्नल एक अलग समन्वय प्रणालीमा प्रदर्शित हुन्छ। तपाईं टिनाको तर्क विश्लेषक भर्चुअल साधनमा डिजिटल अनुकरणको परिणाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। TINA मा डिजिटल घटकहरू गेट्स, फ्लिप-फ्लपहरू, तर्क आईसीहरू र MCUs, AD र डीए कन्वर्टर्स, VHDL र वेरिइल घटक जस्ता जटिल डिजिटल घटकहरू जस्ता आधारभूत डिजिटल भाग समावेश गर्दछ। तपाईले पनि डिजिटल र एनालॉग घटकहरू मिश्रण गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो भनिएको मिश्रित सर्किटहरूमा छलफल गरिन्छ मिश्रित सर्किट सिमुलेशन.
आधारभूत डिजिटल सर्किट
TINA को घटक पुस्तकालयहरूमा डिजिटल गेट्सबाट गेट्सका धेरै डिजिटल घटकहरू समावेश छन्।
गेट्स: बफर, ट्रिप-स्टेट बफर, इनवर्टर, श्मिट इन्वर्टर, र (एक्सएनएक्सएक्स, एक्सएनएक्सएक्स, र एक्सएनक्सक्स आगत), वा (एक्सएनएक्सएक्स, एक्सएनएक्स, र एक्सएनएक्स आगत), NAND (2, 3, र4इनपुटहरू), NOR (2 , 3, र4इनपुटहरू), र XOR
फ्लिप फ्लप: डी लच, डी फ्लिप फ्लप, एसआर फ्लिप फ्लप, जे के फ्लिप फ्लप
डिजिटल आईसी: 74000 तर्क परिवार, 4000 तर्क परिवार
आधुनिक इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूको जटिल तर्क नियन्त्रण प्रायः प्रोग्रामयोग्य यन्त्रहरू जस्तै माइक्रोक्रोमलरहरू (MCUs), FPGAs, ASIC हरूको आवश्यकता पर्दछ। CPLDs। SPLDs आदि। TINA को घटक पुस्तकालयहरूले 800 MCU हरू भन्दा बढी समावेश गर्दछ, जबकि अन्य प्रोग्रामयोग्य यन्त्रहरू TINA मा उपलब्ध VHDL र Verilog हार्डवेयर वर्णन भाषाहरू द्वारा वर्णन गर्न सकिन्छ।
TINA मा माइक्रोकोन्डररहरू (PIC, AVR, 8051, HCS, ARM) को विस्तृत दायरा समावेश छ जुन तपाइँले अन्तरक्रियात्मक रूपमा परीक्षण, डिबग र चलाउन सक्नुहुनेछ। एमसीयू संयोजकमा निर्मित तपाईं तपाईंलाई आफ्नो कोडाल कोड को परिमार्जन गर्न र तुरुन्तै परिणाम देख्न अनुमति दिन्छ। तपाईं पनि बाह्य सी compilers को प्रयोग गरेर MC मा MCU हरू प्रोग्राम र डिबग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले TINA मा माइक्रोक्रोमलर सर्किट सिमुलेशनमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। माइक्रोक्रोमलर सर्किट.
TINA समावेश गर्दछ सबै प्रमुख एनालॉग, डिजिटल र मिश्रित हार्डवेयर विवरण भाषाहरु: VHDL, वेरिइल एचडीएल सिमुलेशन। Verilog-A र Verilog AMS एनालॉग, डिजिटल र मिश्रित-सिग्नल-एनालॉग-डिजिटल वातावरणमा डिजाइनहरू प्रमाणित गर्न AMS। तपाईंको सर्किटले TINA र Xilinx वा अन्य एचडीएल लाइब्रेरीहरू आफैलाई सिर्जना गरी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नका लागि सम्पादन योग्य एचडीएल ब्लकहरू समावेश गर्न सक्दछ। TINA गति अनुकूलन को लागि एचडीएल को अत्यधिक कुशल मिसिन कोड मा संगत गर्दछ। तपाईं एचडीएल र आजादीलाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ Spice मैक्रो र TINA को योजनाबद्ध घटक। साथै तपाइँ कुनै HDL घटकहरूको HDL स्रोत सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अनुकरण गर्नुहोस् र तुरुन्त परिणाम हेर्नुहोस्। एचडीएल डिबगरमा बनाइएको तपाईं एचडीएल कोड चरण-दर-चरण निष्पादित गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रेकस्पटहरू थप्नुहोस्, हेर्ने बिन्दुहरू, प्रदर्शन चर जानकारी, आदि।
तपाईं टिभीमा एचडीएल सर्किट सिमुलेशनमा डिजिटल एचडीएल अनुकार (VHDL र वेरिइलोग) मा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
डिजिटल VHDL सर्किट अनुकरण
डिजिटल Verilog सर्किट सिमुलेशन